48 “Mmusua mmusua no din ni. Efi atifi fam tɔnn kɔfa Hetlon+ kwan so ba Hamat+ hye so fa Hasar-Enan+ a ɛwɔ Damasko hye so wɔ atifi fam ba Hamat asase ho no yɛ Dan+ kyɛfa; n’ahye da apuei ne atɔe, asase biako. 2 Aser+ toa Dan so, na n’ahye da apuei ne atɔe; ɛyɛ asase biako. 3 Naftali+ toa Aser so, na n’ahye da apuei ne atɔe; ɛyɛ asase biako. 4 Manase+ toa Naftali so, na n’ahye da apuei ne atɔe; ɛyɛ asase biako. 5 Efraim+ toa Manase so, na n’ahye da apuei ne atɔe; ɛyɛ asase biako. 6 Ruben+ toa Efraim so, na n’ahye da apuei ne atɔe; ɛyɛ asase biako. 7 Yuda+ toa Ruben so, na n’ahye da apuei ne atɔe; ɛyɛ asase biako. 8 Na asase a mubetwa sɛ ntoboa no toa Yuda so, fi apuei kɔ atɔe. Ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa mpem aduonu anum,+ na ne ntwemu te sɛ mmusua mmusua no asase no, fi apuei kosi atɔe. Na wɔde kronkronbea no besi mfinimfini.+ 9 “Na asase a mubetwa ama Yehowa sɛ ntoboa no ntwemu bɛyɛ basafa mpem aduonu anum, na ne tɛtrɛtɛ ayɛ mpem du. 10 Wontwa eyi mma asɔfo+ no sɛ ntoboa kronkron: Atifi fam, basafa mpem aduonu anum; atɔe fam tɛtrɛtɛ, mpem du; apuei fam tɛtrɛtɛ, mpem du; na anafo fam ntwemu, mpem aduonu anum. Na wɔde Yehowa kronkronbea besi mfinimfini.+ 11 Ɛbɛyɛ asɔfo no dea, Sadok+ mma a wɔatew wɔn ho a wɔyɛɛ m’adwuma no. Eyinom na wɔamfi m’akyi bere a Israelfo fii m’akyi, sɛnea Lewifo no fii m’akyi no.+ 12 Wobenya asase a wɔatwa sɛ ntoboa no bi, na ɛbɛyɛ akronkronne mu ade kronkron wɔ Lewifo hye ho.+ 13 “Lewifo no benya asase+ wɔ asɔfo no de ho. Ne ntwemu bɛyɛ basafa mpem aduonu anum, ne tɛtrɛtɛ nso mpem du; asase no nyinaa ntwemu yɛ mpem aduonu anum, na ne tɛtrɛtɛ nso mpem du.+ 14 Ɛnsɛ sɛ wotwa asase no bi tɔn, na wɔmmfa nnsesa hwee, na wɔnnnan asase no fã a eye no mmma obi, efisɛ ɛyɛ akronkronne ma Yehowa.+ 15 “Na asase no fã a aka a ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa mpemnum a ɛda mpem aduonu anum no ho no de, ɛyɛ asasehunu a ɛda kurow no ho.+ Nnipa bɛtenatena hɔ na wɔde hɔ ayɛ mmoa adidibea. Na kurow no bɛda mfinimfini.+ 16 Kurow no nsusuwii ni: N’atifi yɛ basafa mpemnan ne ahanum; anafo, mpemnan ne ahanum; apuei, mpemnan ne ahanum; atɔe, mpemnan ne ahanum. 17 Na kurow no benya mmoa adidibea:+ N’atifi bɛyɛ basafa ahanu aduonum; anafo, ahanu aduonum; apuei, ahanu aduonum; atɔe, ahanu aduonum. 18 “Na asase a ɛbɛka no ntwemu ne ntoboa kronkron+ no bɛyɛ pɛ. Apuei fam bɛyɛ basafa mpem du, na atɔe fam nso mpem du. Ɛne ntoboa kronkron no nyinaa bɛyɛ pɛ; na kurow no mu adwumayɛfo bedi ɛso nnɔbae.+ 19 Na kurow no mu adwumayɛfo a wofi Israel mmusuakuw nyinaa mu bɛdɔw asase no.+ 20 “Asase a mubetwa sɛ ntoboa no nyinaa ntwemu yɛ basafa mpem aduonu anum, na ne tɛtrɛtɛ nso yɛ mpem aduonu anum. Asase ahinanan na mode bɛma sɛ ntoboa kronkron ne kurow no asase. 21 “Nea ɛbɛka no bɛyɛ obirɛmpɔn+ no dea. Ɛbɛda ntoboa kronkron no ne kurow+ no benkum ne nifa so, wɔ ntoboa no apuei fam a ɛyɛ basafa mpem aduonu anum no ne n’atɔe fam+ a ɛyɛ basafa mpem aduonu anum no nkyɛnmu. Obirɛmpɔn no de no bɛyɛ sɛ mmusua no de no ara pɛ. Na ntoboa kronkron ne Fie no kronkronbea no bɛda mfinimfini. 22 “Lewifo no asase ne kurow no bɛda obirɛmpɔn no asase mfinimfini. Na obirɛmpɔn no asase bɛda Yuda+ ne Benyamin asase no ntam. 23 “Na mmusuakuw a aka no de ni: Asase a edi hɔ fi apuei fam hye so ba atɔe fam hye so no yɛ Benyamin+ dea, asase biako. 24 Simeon+ toa Benyamin so, na n’ahye da apuei ne atɔe; ɛyɛ asase biako. 25 Isakar+ toa Simeon so, na n’ahye da apuei ne atɔe; ɛyɛ asase biako. 26 Sebulon+ toa Isakar so, na n’ahye da apuei ne atɔe; ɛyɛ asase biako. 27 Gad+ toa Sebulon so, na n’ahye da apuei ne atɔe; ɛyɛ asase biako. 28 Na Gad hye a ɛwɔ anafo fam no bɛkɔ anafo akɔfa Tamar+ akosi Meribat-Kades+ nsu ho, na ebefi subon+ no ho akɔ Po Kɛse+ no ho. 29 “Eyi ne asase a mobɛkyɛ ama Israel mmusuakuw no,+ na abusua biara kyɛfa bɛyɛ n’agyapade,”+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 30 “Na kurow no ho akwan ni: Atifi fam nsusuwii bɛyɛ basafa mpemnan ne ahanum.+ 31 “Na wɔde Israel mmusuakuw no din bɛfrɛ apon no. Apon abiɛsa wɔ atifi fam​—Ruben pon biako, Yuda pon biako, Lewi pon biako. 32 “Apuei fam bɛyɛ basafa mpemnan ne ahanum, na ebenya apon abiɛsa; Yosef pon biako, Benyamin pon biako, Dan pon nso biako. 33 “Na anafo fam nsusuwii bɛyɛ basafa mpemnan ne ahanum, na ebenya apon abiɛsa; Simeon pon biako, Isakar pon biako, Sebulon pon nso biako. 34 “Atɔe fam bɛyɛ basafa mpemnan ne ahanum, na ebenya apon abiɛsa; Gad pon biako, Aser pon biako, na Naftali pon nso biako. 35 “Sɛ wosusuw ɛho nyinaa twa hyia a, ɛbɛyɛ basafa mpem dunwɔtwe; na efi saa da no, wɔbɛfrɛ kurow no Yehowa Ankasa Wɔ Hɔ.”+